Geessituu naanna'aa waliin saaguu
Galmee kee keessatti Naanna'aa fayyadamuudhan waabeffannaa akka geessituutti saaguu dandeessa. Wantoota LibreOffice galmeewwan biroo irraa illee waabeffannaa gochuu dandeessa. Geessituu yommuu galmeen LibreOffice keessaa bana jiru yoo cuqaaste, gara wantoota waabeffanna ta'anii dhaqxa.
Galmee(wwan) wantoota waabeffanaa gochuu barbaaddu qaban bani.
kamshaa durti irraa, sajoo Naanna'aa cuqaasi.
Xiyya sajoo Haalata Harkisuutti aanee jiru cuqaasudhan Akka Geessituutti Saagi n filatamuu isaa mirkaneessi.
Tarrree jala Naanna'aa keessa, galmee wanta wabeeffanna gochuu barbaaddu qabu filadhu.
Tarree Naanna'aa keessaa, qoyyaba ida'uu wanta akka geessituutti saagu barbaaddetti aanee jiru cuqaasi.
Wanta iddoo geessituu galmee keessatti saaguu barbaaddetti harkisi.
Maqaan wantaa galmee keessatti akka geessituu jala murameetti saagama.
Title is: Geessituu naanna'aa waliin saaguu